Kooxda Chelsea oo markaan doonaysa xiddig yaraha Barcelona ee Gavi & Qiimaha ay Blues ku heli karto laacibkan oo aad u hooseeya – Gool FM
(London) 20 Jan 2022. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xiiseynaysa saxiixa xiddig yaraha naadiga Barcelona ee Gavi.
Sida uu warinayo Warsidaha El Nacional Kooxda kubadda cagta Chelsea ee ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa doonaysa inay gacanta ku soo dhigto da’yarka Barcelona ee Gavi.
Warbixin sida lagu sheegay 17-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa haatan u ogolaanayaa Blues inay kula soo saxiixato adduun dhan 50 milyan oo euro oo u dhiganta 42 milyan oo gini ama 57 milyan oo dollar.
Dhanka kale kooxda reer Spain ee Barca ayaa la warinayaa inay wadahadallo heshiis kordhin ah la furay Gavi, iyadoo doonaya in qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa ay ka dhigto mid aad u sarreeya.
Maxaa burburiyay heshiiskii weynaa ee hadda ka hor lagu mideyn lahaa Ronaldinho iyo Zidane?... (Dalkee ayayna ka wada ciyaari lahaayeen?)